OnePlus 9 Lite: Gini ka anyi nwere ike icho anya na ekwentị ozo? | Gam akporosis
OnePlus na-agbaso usoro ahia ohuru kemgbe afọ gara aga, nke malitere na OnePlus North, mbụ ya smartphone dị n'etiti, n'adịghị ka ụdị flagship ahụ siri ike, ezubere iji ndị ọrụ na-achọghị oke. Mgbe ahụ, n’ịhụ na usoro a gara nke ọma, ọ malitere usoro Nord mobiles ọzọ, nke bụ Nord N10 5G na N100; nke ikpeazụ ahọrọ maka chipset dị ala, na-eme ya ngwaọrụ mmefu ego.
Ihe niile yiri ka ọ na-egosi na ika ahụ ga-aga n'ihu ịkụ nzọ na ekwentị ya, nke egosiri dị ka nhọrọ na-adọrọ mmasị maka ndị na-enweghị ike inweta ekwentị ndị kachasị elu nke ụlọ ọrụ ahụ. Agbanyeghị, OnePlus nwere ike ịgbakwunye usoro ntanetị ọhụrụ, nke ga-eweta ụdị "Lite" nke ọkọlọtọ ya, nke a ga-amalite na onye ọzọ OnePlus 9 na Otu OnePlus 9 Lite, ngwaọrụ a na-anụrịrị asịrị ebe niile.
Nke a bụ ihe anyị ma rue ugbua gbasara OnePlus 9 Lite
E nwere ikuku nke atụmanya dị elu banyere ihe OnePlus 9 Lite ga-abụ. Agbanyeghị na ụlọ ọrụ ahụ akwadobebeghị ekwentị mkpanaaka a, ekwuru na ọ ga-abụ otu n'ime ụdị ndị na - esote ka ọ bụrụ akụkụ nke akwụkwọ akụkọ ya, yabụ enweela ọtụtụ okwu banyere njirimara nwere ike ịkọwapụta na nkọwapụta teknụzụ nke ọ nwere ike ịnya isi otu oge. a na-eme ya n'ahịa, nke ga-eme n'otu oge ahụ na-ewepụta ma wepụta OnePlus 9.
Na ọkwa nke Qualcomm Snapdragon 870, anyị ga-ahụ egwuregwu ọhụụ na afọ a site na ndị na-emepụta ama ama, rue usoro usoro ha dị elu. Ma ọ bụ na ihe nhazi a chipset bụkwa arụmọrụ dị elu, ịbụ, n'aka nke ya, nhọrọ dị ọnụ ala karịa Snapdragon 888, Qualcomm kasị ike mobile ikpo okwu taa.
Ngwaọrụ ndị ebidoro na Snapdragon 870 ga-adị ọnụ ala karịa ndị nwere Snapdragon 888, doro anya, na akaebe nke a bụ ihe anyị hụrụ na nke ọhụrụ Motorola Moto Edge S, nke a mara ọkwa ụbọchị ole na ole gara aga na ọnụahịa ntọala nke ihe dị ka euro 250 ịgbanwe, ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ a kwekọrọ na ahịa ndị China; Anyị maara nke ọma na nke a ga-abawanye nke ukwuu na ahịa mba ụwa, mana ọbụlagodi na ọ bụ ihe akaebe izizi nke njedebe dị elu dị ọnụ ala nke 2021 a.
Ọ bụ ezie na ngwaọrụ a dị elu ga-abụ "ọnụ ọnụ", ọ ga - enwe ọbá akwụkwọ nke atụmatụ na-atọ ụtọ na nkọwapụta teknụzụ, n'etiti nke anyị nwere, dịka asịrị na nchapu na nso nso a a na ihuenyo 6.5 nke anụ ọhịa diagonal - ma ọ bụ obere - na-enye ume ọhụrụ ọnụego 90 ma ọ bụ 120 Hz; o yikarịrị ka ọ ga-abịarute 90 Hz. N'aka nke ya, teknụzụ nke ogwe a ga-abụ ụdị IPS LCD, iji belata ọnụahịa.
OnePlus 9 na 9 Pro: ụfọdụ n'ime atụmatụ ya agbapụtawo + + Ndị na-eweta]
A ga-enye RAM nke OnePlus 9 Lite na ụzọ abụọ, nke ga-abụ 6 na 8 GB. Oghere nchekwa dị n'ime, n'aka nke ọzọ, ga-abụ naanị 128 GB maka okwu abụọ ahụ, na-enweghị ohere ịgbasawanye site na kaadị microSD. Nke ikpeazu bu n'ihi na ga-eguzogide ọgwụ ikwommiri, na mmejuputa oghere microSD ga-abụ nsogbu maka ya.
Leaked nsụgharị nke OnePlus 9 Pro
The n'azụ igwefoto usoro nke mobile ga-Mmaji Atọ na ga-emi esịnede a isi ihe mmetụta nke 48 MP na abụọ obosara-n'akuku na nnukwu nke 16 na 5 MP, karị. Na mgbakwunye, igwefoto dị n'ihu, nke nwere ike iru oghere na ihuenyo ahụ, ga-abụ 16 MP.
4.300 mAh nke ikike ga-adị mma maka batrị ekwentị, ebe teknụzụ ngwa ngwa 30-watt Warp Charge 30T ga-abụ nke anyị ga-achọta. A ga-agba ụgwọ a site na ọdụ ụgbọ USB-C.
Ihe ngosi ndị ọzọ na-ekwu banyere onye na-agụ akara mkpịsị aka n'azụ ma ọ bụ n'akụkụ, NFC Njikọ, na Bluetooth 5.1. gam akporo 11 ọ ga-abụ sistemụ arụmọrụ nke ọ na-abịa n'okpuru ụdị OxygenOS kachasị ọhụrụ.
Anyị na-eche nkwenye na ọkwa nke ihe niile ekwuru, yana ọnụahịa ya na ụbọchị mbido ya, ọ bụ ezie na anyị kwesịrị ibu ụzọ mara ma a ga-ebuputa ụdị a ma ọ bụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » OnePlus 9 Lite: Gini ka anyi nwere ike icho anya na ekwentị ozo?
Google ga-ekwe ka ezigbo ego ịgba chaa chaa ngwa na Spain na mba 14 ndị ọzọ